सुष्माको भ्रमणले गठबन्धन भाँडिने संकेत, यसरी खुल्यो रहस्य - TV Annapurna
February 4, 2018 February 4, 2018 Annapurna TV
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणले नेपालमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । चारैतिरबाट अनेक किसिमका अड्कलबाजी र विचार प्रकट भइरहेका छन् । यतिबेला स्वराज स्वदेश प्रस्थान गरिसकेकी छन् तर चर्चा कायमै छ । वास्तवमा स्वराजको अपर्झटको नेपाल भ्रमण अनपेक्षित नै थियो । यसका पछाडि केही न केही रहस्य लुकेकै थियो किनभने भारत जस्तो देशको विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण कुनै प्रयोजन कुनै उद्देश्यबिना हुन सक्दैन । विगत केही वर्षदेखि नेपाल भारत सम्बन्धमा केही तिक्तताको स्वाद देखिएको कुरा सबैले बुझेकै कुरा हो । नेपाल र भारतको छिमेकी स्थायी रुपमै भूगोलका आधारमा सबैभन्दा निकट भएको तर व्यवहारका आधारमा त्यत्ति प्रशंसायोग्य नभएको कुरालाई कसैले लुकाएर राख्न सक्दैन । भारतको ठालु र हेपाहा प्रवृतिको सामना नेपालले विगतदेखि नै चाहेर या नचाहेरै भएपनि सहँदै आएको छ । बेलाबखतमा नेपालले पनि केही विद्रोहका ध्वनीहरु गुञ्जायमान गर्छ बदलामा नेपालले त्यसको सजाँय भोग्दै आएको छ । छिमेकीलाई साट्न पनि मिल्दैन फेर्न पनि मिल्दैन तर एकअर्काको हैसियत र अस्तित्व भने दुबैले बुझनु जरुरी छ । नेपालका शासकहरुको मनगढन्ते बैदेशिक नीति व्यबहारमा देखिएको हुँदा पनि परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपाल सफल बन्न सकेको छैन ।
सुष्माको नेपाल भ्रमणमा कसले पाए ? कसले गुमाए ?प्रसंग छ सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको केहीदिन अघि नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका केपी ओलीलाई फोनवार्ता गरी बधाई दिएका मोदीले ओलीलाई भारत भ्रमणको समेत बचन दिए । जबाफमा ओलीले मोदीलाई निम्तोको बचन दिएपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधार हुने संकेत देखियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका समयमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको कारण केपी ओली भारतका अनुकुल पात्र होइनन् भन्ने कुरा बुझिएको थियो । यो कुरालाई केपी ओलीले भारतप्रति देखाएको कठोर अडानले पनि पुष्टी गर्यो । केही समय टिक्न नपाउँदै ओलीलाई एकाएक सत्ताबाट पछारिनुमा पनि भारतको कुनियत रहेको आशंका गरियो । संविधान संशोधनको विषयमा भारत अनावश्यक रुपमा कनकन गर्नुले ओली एकप्रकारले भारतसँग चिढीँएका थिए । निर्वाचनको मतपरिणाम ओलीकै पक्षमा खनिएपछि भारतलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । अब भारतले चाहेर या नचाहेर पनि केपी ओली संभवत नेपालको प्रधानमन्त्री हुने कुरा रोक्न नसक्ने भएको छ । निर्णय र अडानमा जब्बर मानिएका ओलीसँग सम्बन्ध नसुधार्दा भारतलाई पनि खासै फाइदा हुने छाँटकाँट मोदीले देखेनन् या भारतले देखेन जसले गर्दा ओलीसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने निष्कर्शमा भारत पुगेको देखिन्छ । अर्कोतीर अबको भावी नेतृत्व गर्ने पात्रहरुलाई बेखुस बनाउँदा नेपालमा चिनीँया प्रभाव बढ्ने अनुमान भारतले लगाई ओलीलाई फकाउने खेलमा भारत लागेको स्पष्ट छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमण बेमौसमी बाजा जस्तै देखिएपनि, परराष्ट्र नीतिका हिसाबले अनुचित देखिएपनि भारतलाई नेपालसँग बिग्रिएका हिसाबहरु मिलाउनु थियो र उसले त्यसको प्रयासस्वरुप नेपाल भ्रमण गरायो । भारतको भाषा बोल्ने सुष्मा त भारतकी प्रतिनिधि मात्र हुन् । सुष्मा कसको निम्तोमा आइन् भन्ने बहस लम्बिन सक्छ। तर कुरो स्पष्ट के हो भने भारतलाई नेपाल आउन भिसा लाग्ने होइन क्यार । जतिबेला जो पनि आउन सक्ने । नेपाली नेताहरु थाहा समेत नदिइ दिल्ली दरबारको दर्शन लिन जान हुन्छ भने उनीहरु आउँदा पनि त्यति बढी ठाउँ किन दिनु ? तर स्वराजको नेपाल आगमनले भने ठूलो अर्थ राख्छ । बाम गठबन्धनलाई कमजोर पार्न स्वराजको भ्रमण फलदायी हुने पक्का छ। प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म सिट बाँडफाँड सहजै भए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने सम्भावना भने न्युन बन्दै गएको छ । स्वराजका प्रभाव परेसंगै सरकारमा एमाले र माओवादीका मन्त्रालय संख्या घट्ने सम्भावना छ। भारतलाई रिझाउनका लागि एमाले र माओवादीका सिट काटेर संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाललाई दिने तयारी भइरहेको उच्च स्रोत बताउँछ। स्वराजले मिलेर अगाडि बढ्नु भनेर खुल्ला सन्देश दिएकी छिन् । त्यो सन्देश मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई भित्र्याउनु भनेको हो। ओलीले यसमा सहमति जनाइसकेको बुझिन्छ । तर कतै प्रचण्ड र सिंगो पार्टीलाई हानी हुने त हैन ? के यसबारे माओवादी गम्भीर छ ?
सुष्मा नेपालमा आएर सबैभन्दा बढी महत्व केपी ओली र प्रचण्डलाई दिएको कुरा जगजाहेर नै छ । प्रधानमन्त्री भइकन पनि शेरबहादुरले त्यत्ति महत्व नपाउनु आफैमा रहस्यमय छ । जसको कारण नेपालमा आगामी नेतृत्वलाई फकाउन खोजेको कुरा स्पष्ट छ । सुष्मा स्वराजको मूलभूत उद्देश्य भनेको एमालेलाई बढी महत्व दिएर उक्साउनु र वामगठबन्धनलाई सकेसम्म टुक्राउनु, मधेशी दललाई सरकारमा सामेल गराउनु जसले गर्दा एमाले माओवादीको मन्त्रीपरिषद्मा कम उपस्थिति हुने भएको छ । साथै आगामी सरकारलाई जसरी पनि हात लिनु । यिनै अभीष्ट पूरा गराउन भारतले विदेशमन्त्रीलाई विदेश भ्रमणको कार्यक्रम पूरा गरेको हो ।
मानवीय सभ्यता र विकासको क्रम निरन्तर उकालो लाग्दै गरेको वर्तमान परिवेशमा अब हरेक देश र राज्यले आपसमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा उपनिवेश र अधिनमा पार्ने खालका मान्यताहरु विश्वबाटै पतन भएका छन् । हरेक राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सम्मानमा कसैले हस्तक्षेप गर्ने र अबरोध गर्ने काम कुनै पनि तरिकाबाट जायज हुन सक्दैनन् । भारतजस्तो विशाल र ठूलो देशले अब नेपालको मामिलामा सधै गिजोलेर बस्ने मान्यताबाट पछि हट्नुपर्छ । सधै अधिनमा र कब्जामा राखी आफ्ना निहित स्वार्थहरु पूर्ती गर्ने फोहोरी खेल भारतले सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ । भारतीय बुद्धिजीवि र विश्लेषकहरुले पनि अब यस्ता मानवीय मूल्य मान्यताका विषयमा बहस चलाउनुपर्छ त्यो बाटोमा हिड्न नेतृत्वलाई सुझाउनुपर्छ । भारतमा परराष्ट्रनीतिका सम्बन्धमा सकरात्मक बहस कमै हुने गर्दछ । विश्वले निकै डरलाग्दा र अशान्तिका महासंग्रामहरु भोग्दै आएको छ । अब विश्वशान्ति र सम्मानका आधारमा सम्पूर्ण देशहरु बाँच्नुपर्छ र बाँच्न पाउनुपर्छ । विदेशनीतिमा सधै अनुदार र छुद्र व्यवहार देखाउने भारत अबका दिनमा पनि सच्चिएन भने भारतको प्रभाव विश्वबाटै खस्किने निश्चित छ ।
नेपाली क्रिकेट टिम नामिबिया प्रस्थान